साढे दुई वर्षसम्म यी पाँच राशिमा शनिको प्रभाव ! [बच्ने ज्योतिषीय उपायसहित] – Chautari Online
October 31, 2020 391
ज्योतिष शास्त्रमा शनिको विशेष भूमिका हुने गर्दछ। शनिको राम्रो र नराम्रो प्रभावले व्यक्तिलाई निकै खुशीका साथै केहि समस्याहरु पनि निम्त्याउने गर्दछ। शनिलाई निष्पक्ष ग्रह पनि भनिन्छ। २४ जनवरी २०२० देखि शनि मकर राशिमा यात्रा गरिरहेको छ र अर्को साढे दुई वर्षसम्म यो राशिमानै रहनेछ। यदि, शनि कुनै एक राशिमा बसिरहन्छ भने यसले त्यस राशिलाई मात्रै नभई अन्य राशिहरुलाई पनि असर गर्छ।
मकर राशिमा शनिको गोचरका कारण धनु, कुम्भ र मकर राशिमा पनि शनिको साढेसाती चढेको छ। जबकि मिथुन र तुला राशिमा शनिको ढैय्या चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, यी पाँच राशिका व्यक्तिहरुले कैयौँ समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरि, मे महिनाको ११ तारिखमा वक्री चाल चल्नेछ। जसका कारण, यी राशिका व्यक्तिहरुमा अझै अधिक समस्याहरु थप्पिन सक्छ।
यदि शनि कुनै पनि व्यक्तिको कुंडलीको शुभ स्थितिमा छ भने, शनिको चालले उक्त व्यक्तिलाई धेरै फाइदाहरू दिने गर्छ। त्यसै गरि, यदि कुंडलीमा शनि अशुभ स्थानमा छ भने नराम्रो असरहरु देखिनेछ। शनिको कुप्रभावमा पर्ने व्यक्ति यदि केहि ज्योतिषी उपायहरुको प्रयोग गर्छ भने शनिले कम प्रभाव पार्नेछ। आउनुहोस्, शनिको नराम्रो प्रभावबाट बच्न केही ज्योतिषी उपायहरुको बारेमा चर्चा गरौ…
विश्वास गरिन्छ कि, हनुमान भक्त अथवा अनुमानको पूजा गर्ने व्यक्तिमा कहिले पनि शनिको अशुभ छाया पर्दैन। त्यसैले शनिलाई खुशी पार्न प्रत्येक मंगलबार र शनिबार हनुमानको विशेष पूजा गर्नुपर्दछ।
शनिको अशुभ प्रकोपबाट बच्न राम्रो ज्योतिषीको सल्लाह लिएर नीलमणि रत्न लगाउनु पर्दछ।
शनिको साढेसाती वा ढैय्याबाट प्रभावित व्यक्तिले कुनै प्रकारको गलत काम गर्नु हुँदैन।
बेलुका कालो तिलको तेलले बत्ती जलाउँदा शनि दोष हट्ने विश्वास गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा, साढेसाती या ढैय्या चलिरहेका व्यक्तिहरुले यस उपाय अपनाउनु पर्दछ।
शनि मन्त्रको नियमित जप गरेर पनि शनिको अशुभ प्रभावहरुबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ।
प्रत्येक शनिबार शनिको मन्दिरमा गएर शनिदेवको दर्शन गरि गरीबहरूलाई दान गर्नाले पनि यसको प्रकोपबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास गरिन्छ।
Prevकिन पुरुषलाई यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ?
Nextप्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्डको प्रस्ताव
काठमाडौं उपत्यकाका थप ४६४ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि
कुलमानको बहिर्गमनसँगै अघोषित लोडसेडिङ गरेको गुनासो, आज पनि ठाउँ-ठाउँमा लाइन काटिँदै